Ithetha ntoni i-OEM / ODM kwimveliso yempahla?
ngomphathi ku 20-11-16
I-OEM kunye ne-ODM ziindlela ezimbini zokuvelisa iimpahla. Mhlawumbi ubabonile kwiindawo ezininzi. Kodwa zithetha ntoni kanye kanye? Makhe sive. 1.OEM - Original Izixhobo yoMvelisi Isixhobo sokuqala umenzi impahla yaziwa ngokuba ileyibheli emhlophe iimpahla umenzi okanye priv ...
Iimveliso ezifudumeleyo zasebusika kwiingubo zeLotte
Ihowuliseyili hooodies Casual intuthuzelo hoodie nge kangaroo isimbo epokothweni 2 * 2 ubambo elastane kwi cuffs kunye esinqeni. Unyango lokunqanda ukopha 65% ipholiyesta / 35% yomqhaphu ibrashi yoboya 250g Ukutshatisa umbala wesinyithi kuphele ukujikeleza umtya wokurhweba ngokwezifiso irabha eprintiweyo ilogo ...
Uboya begusha Ngoku ke yintoni eyenza ilaphu loboya? Izambatho zoboya zidibene, kwaye ke ubuncinci icala elinye lihlanjwa ukukhulula imicu kunye nokwenza i-nap (indawo ephakanyisiweyo) yokuziva ethambileyo, epholileyo. Kwizikhuselo zoboya ezisisiseko kunye neebhulukhwe, ngokubanzi ngaphakathi kwengubo i ...